BBC သတင်းထောက် နန်းချယ်ရီခန်း၏ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားအပေါ်တွင် နောက်ထပ် ရိုဟင်ဂျာအမည် သုံးစွဲလာ ခြင်းအား သတိပေး တားမြစ်ချက်။ | မြတ်နိုင်
မြတ်နိုင်	လူသားတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် မှတ်တမ်းလေးတစ်ခု	BBC သတင်းထောက် နန်းချယ်ရီခန်း၏ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားအပေါ်တွင် နောက်ထပ် ရိုဟင်ဂျာအမည် သုံးစွဲလာ ခြင်းအား သတိပေး တားမြစ်ချက်။
လေးစားအပ်တယ် ရခိုင်သူသားများနှင့် တိုင်းရင်းသားအပေါင်းတို့
ယနေ့ထုတ်လွင့်သော BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်၏ ညနေပိုင်း အစီအစဉ်တွင် ဒေါ်နန်းချယ်ရီခန်း၏ ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့် တိုင်းရင်းသား ညီနောင် ၅ပါတီ တွေ့ဆုံမှုတွင် ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားများဟု သုံးနှုန်းပြီး တင်ဆက်မှုသည် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း နေထိုင်သော ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နိုင်ငံသား နိုင်ငံခြားသား ဘင်္ဂလီလူမျိုး များအားမြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ တိုင်းရင်း သားများဟု ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲသွားမှုမှာဒေါ်နန်းချယ်ရီခန်း၏ အလွန် တရာ တာဝန်မဲ့ စွာသုံးနှုန်းခဲ့ခြင်းဖြစ် ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားများသမိုင်းကို မည်သည့်တလုံးတပါဒမှ မသိ၊နားမလည်ဘဲ တာဝန်မဲ့စွာ ထုတ်လွင့်ခဲ့မှုအား ကန့်ကွက်ချူပ်ချ ကြောင်း
နှင့် ၄င်းအသုံးအနှုန်းနှင့် ပတ်သက် ပြီး ဖြေရှင်းချက်ပေးပါရန် သဘောထားထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။
Miss Anna Jonne ဆိုသော နိုင်ငံခြားသူတစ်ယောက်မှလဲ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အား ဖေါ်ပြရာတွင် ရိုဟင်ဂျာ ဟုဖေါ်ပြခဲ့ သည့်အတွက် ၄င်းမိန်းမအား တကမ္ဘာလုံးမှမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး ကန့်ကွက် ခဲ့ကြသည်ဆိုခြင်းအား ဒေါ်နန်းချယ်ရီခန်း အသိဆုံးဖြစ်မည်ဟု ယုံကြည်ပါ သည်။ ထိုသို့သိရှိပါလျက်နှင့် ယခုကဲ့သို့တိုင်းရင်းသား၅ပါတီ တွေ့ဆုံမှုတွင် ရိုဟင်ဂျာ တိုင်းရင်းသားဟု အဘယ်ကြောင့် ပြောဆို သည်ကို ဖြေရှင်းချက်ပေးရန်နှင့် ၄င်းသုံးနှုန်းခဲ့ခြင်းအားရခိုင်သူ/သားများအားလုံးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသားများအားလုံး Miss Anna Jonne အား တိုက်ထုတ်သကဲ့သို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းတိုင်းရင်းသားမဟုတ်သည့် နိုင်ငံခြားသားများအားအတင်းအဓမ္မ တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသံလွှင့်နေသော BBC အသံလွှင့်ဌါနအားလည်းကန့်ကွက်ကြပါရန် လေးစားစွာတိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
မြန်မာတိုင်းရင်းသားအားလုံးမြေမျို၍လူမျိုးမပျောက်ပါ လူမျိုမှလူမျိုးပျောက်ပါမည် ထို့ကြောင့်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ၏ အန္တရယ်ဖြစ်သော ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နိုင်ငံ၏ လူဦးရေပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော ဘင်္ဂလီလူမျိုး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသား နိုင်ငံခြားသားများ၏ လိမ်လည်မှုကဏ္ဍများအား အမြဲတမ်းထုတ်လွင့်နေသော BBC အသံလွင့်ဌါန၏ တာဝန်မဲ့မှုနှင့် ဒေါ်နန်းချယ်ရီခန်း၏ မြန်မာနိုင်ငံသားမပီသမှုအား အပြင်းအထန်ကန့်ကွက်ပါသည်။`ဒေါ်နန်းချယ်ရီခန်းအားလည်း မေးလိုပါသည် မိမိနေထိုင်သော ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်ပိုင်လာသော အိမ်အား တခြားလူက ကျူးကျော်ပြီး ဒီအိမ်ဟာငါ့အိမ်ပါလို့ ပြောပြီး အိမ်ပေါ်မှမဆင်းဘဲ နေထိုင်သောသူအားဒေါ်နန်းချယ်ရီခန်း အနေနှင့် ၄င်းလူအား မည်သို့တုန့်ပြန်မည်နည်း ဆိုသည့်မေးခွန်းကိုသာ မေးလိုပါတော့သည်။ ထို့ကြောင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတို့၏ လူမျိုခံနေရခြင်းကို သိရှိနိုင်ရန် သမိုင်းကို များများလေ့လာပါ လို့ တိုက်တွန်းလိုပါသည်။
နှစ်သစ်နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ၁၃၅လုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာကြပါစေလို့ဆုတောင်းလျက်
4 thoughts on “BBC သတင်းထောက် နန်းချယ်ရီခန်း၏ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားအပေါ်တွင် နောက်ထပ် ရိုဟင်ဂျာအမည် သုံးစွဲလာ ခြင်းအား သတိပေး တားမြစ်ချက်။”	ye gyi on January 5, 2012 at 11:10 pm said:
fuck …nan charry..you monther fuck.do u understand ARAKAN?
Reply ↓	mrmonn on January 6, 2012 at 11:00 am said:
First I did not realized that there are many stupid Burmese working with BBC. they don’t realized that Our Shwedagon will be disappeared soon by influx of Bengali in Yangon if there is no Arkanese protection at the border.
Reply ↓	lapyatwon on January 6, 2012 at 8:26 pm said:
copy လုပ်သွားပါတယ် ဗျာ…
Reply ↓	Aung Min on January 6, 2012 at 10:02 pm said:
Another bitch after bastards
ကြေငြာချက်	4 Comments